လိင်တူချစ်သူ - ညစ်ညမ်းခြင်းမှထွက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာကိုခွဲခြားထားသည် - Your Brain On Porn
လိင်တူချစ်သူ - လိင်ကိစ္စကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်အရသာကိုခွဲခြားထားသည်
ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်ကျွန်ုပ်တစ်နေ့လျှင် ၂-၄ ကြိမ်အသုံးပြုသောအချိန်၊ အကြိမ်ကြိမ်သုတ်သင်ရှင်းလင်းခြင်းပြproblemsနာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသည် (ကျွန်ုပ်သည်လိင်တူချစ်သူဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်လိင်တူဆက်ဆံသူဖြစ်သည်ဟုထင်ခဲ့သည်…ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ပျက်ရာများနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ငါသိတယ်)။ ငါလုံးဝရပ်တန့်ခဲ့ရသည်သိတယ်။ ငါအလေ့အထများ၏စွမ်းအားနှင့်သင့် ဦး နှောက်ကိုညစ်ညူးစွာဖတ်ရှု။ ကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်မှာ
ငါသည်ငါ့အတွေးအခေါ်တွေကနေအဖြစ်ထင်ရှားစွာသီးခြား porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေချင်ခဲ့တယ်ရှေ့ဦးစွာ မှစ. သိတယ်။ ရှစ်နှစ်ငါနီးပါးသီးသန့် porn မှ masturbated ခဲ့ကြောင်း, ဒါကြောင့်ငါ porn ကို အသုံးပြု. နှင့်ငါ့ဦးနှောက်နှစ်ခုသီးခြားလုပ်ရပ်များ masturbating စေချင်တယ်။ ငါမ porn, အင်တာနက်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်း 90 နေ့ကပြန်ဖွင့်ဖွင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်, ဒါပေမယ့်ငါ (ကျနော့်ကိုဘေးကင်းလုံခြုံစေခြင်းငှါလှည့်ပတ်ခြင်းမရှိ devices များနှင့်အတူရေချိုးခန်းအတွင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်သော့ခတ်မယ်လို့ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်) လိုချင်အခါတိုင်းငါပယ်လူရှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့မည်ဖြစ်သည်။
ငါ့ထံသို့အရူးခဲ့ကြောင်းအရာတစ်ခုမှာငါ့အလိင်စိတ်ပထမဦးဆုံးမှာကျဆင်းသွားမည်မျှဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ (ပဲဟော်မုန်းများနှင့်မျိုးရိုးဗီဇ၏စည်းကမ်းချက်များ၌) hypersexual ဖြစ်အစဉ်မပြတ်ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်စဉ်းစား (နှင့်နေဆဲပြုပါ) ခဲ့ကတည်းကငါ့ထံသို့ရူးခဲ့သည့်ပထမဦးဆုံးသုံးရက်အားလုံးကိုမှာအဘယ်သူမျှမစိုက်ထူ, တယ်။ ငါလက်ျာဘက်အရာလုပ်နေခဲ့ငါ့ကိုရန်ကြီးမားသောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်မအကြောင်းကိုနှစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်ချွတ်လာတတ်သည်ကိုပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အဘို့, ပြီးတော့ငါ့အဟော်မုန်းနောက်ကျောရေကြီးမှုနဲ့ကျွန်မတစ်ရက်နောက်တဖန်နှစ်ကြိမ်ကလုပ်နေတာခဲ့သည်ရောက်လာတယ်။ ငါသည်ဤငါ၏အ reboot ၏မျက်နှာကို ထောက်. ငါ့အဘို့အနည်းငယ်ကိုအလွန်အကျွံဖြစ်စေခြင်းငှါသဘောပေါက်ဒါကြောင့်ငါ willpower ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်ထက်အခြားဘာမှမများအတွက်မဟုတ်ပါလျှင်ငါတစ်ချိန်ကနေ့ကကန့်သတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
အခု ၅၆ ခုရှိပြီ။ ငါအရမ်းပျော်တယ်၊ ငါ porn ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလုံးဝပြောင်းလဲလိုက်ပြီ။ ငါစိတ်ဖိစီးမှုများအတွက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းယန္တရားအဖြစ်အသုံးပြုသည်မဟုတ်, ငါပျော်မွေ့သောကြောင့်, မွေးနေ့ပွဲမှာငါချောကလက်ကိတ်မုန့်ကိုစားတူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ထိုသို့ပြုကြသည်။
ငါခိုင်မာတဲ့ဘာဝနာအလေ့အကျင့်မပါဘဲအောင်မြင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြသင့်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် reboot စလုပ်သည့်အချိန်တွင်နေ့စဉ် ၁၅ မိနစ်ခန့်နေ့စဉ်တွေးတောဆင်ခြင်နေခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်၏စွမ်းအားတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်ထိုင်နေသောတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်နေ့စဉ်သတိရှိခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းများကိုလည်းပိုမိုအားကောင်းလာခဲ့သည်။ ငါဗုဒ္ဓဘာသာဆုတ်ခွာသွားသည်။ ထိုအရာသည်လည်းဘဝပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်သည်ငါးနှစ်ကြာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သော်လည်း) ယခုတွင်တစ်နေ့လျှင်တစ်နာရီ၊ မနက် ၃၀ နာရီနှင့်ညပိုင်းတွင်မိနစ် ၃၀ ကိုတွေးတောဆင်ခြင်နေသည်။ အစဉ်အမြဲငါနေထိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ငါ့ရဲ့ဘ ၀ ကိုအမြင့်ဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ပြီ၊
Momento အက်ပလီကေးရှင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်၏အိုင်ဖုန်းတွင်နေ့စဉ်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းနှင့်နေ့စဉ်သွားရန် (ကျွန်ုပ်ထင်သည့်ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုပ်ရန်အရေးကြီးသည်) ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြရန်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရာများ၊ တွေးခေါ်မှုများ၊ အောင်မြင်မှုများစသည်တို့အကြောင်းပြောဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှု၏ရင်းမြစ်ကိုသိရန်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်စွမ်းအင်ကိုထုတ်လွှတ်ရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးသောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုလည်းလုပ်ရန်တစ်ခုခုပေးသည်။ နေ့
ငါသည်ဤ post ကိုအလွန်ရှည်လျားသည်ကိုသိပေမယ့်ငါအောင်မြင်ဖို့ကူညီပေးခဲ့သည်သောသူအပေါင်းတို့ကိုဖော်ပြရန်ပိုနှံ့နှံ့စပ်စပ်ဖြစ်ချင်တယ်။ ငါ၏အလိုဆန္ဒ၏အားလုံးသည်, စီမံခန့်ခွဲလာများနှင့်သွားကြဖို့အမြန်နှင့်အမှန်တကယ်ယခုနီးပါးသီးသန့်န်းကျင်ကိုထပ်မဟုတျဘဲပင် porn masturbating နေကြသည်ဖြစ်ကြသည်။ 56 days ago ငါမှန်းဆခဲ့ကြလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။
ငါသည်သင်တို့အားလုံးအများကြီးအောင်မြင်မှုဆန္ဒရှိ, ဤအသိုင်းအဝိုင်းပူးပေါင်းပြီဝမ်းသာတယ်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိပါကငါ့ကိုသိကြကုန်အံ့ပေးပါ။